Banyere Anyị - Ningbo Haitian Holding Group Co., Ltd
Ningbo Haitian ogbara ohuru hiwere na 2001, bụ otu n'ime ndị na-eduga emeputa nke anyanwụ photo-voltaic na anyanwụ modul mmekọrita ngwaahịa usoro China. Haitian aku na R & D na mmepụta nke crystalline sịlịkọn anyanwụ mkpụrụ ndụ na modul. poli-sịlịkọn anyanwụ ogwe nke nwere a nso nke 5 ruo 300 W kwa panel, mono-crystalline anyanwụ ogwe na-na nso nke 160-190W / 260-280W kwa panel. Na anyị na ngwaahịa, na-abịa na OA, Mankeumman, TUV asambodo. E wezụga, anyị nwekwara ike chepụta na-enye ifufe-anyanwụ ngwakọ usoro ihe ngwọta maka gị ma ọ bụrụ mkpa na ụfọdụ pụrụ iche na saịtị,
Haitian nwere ya ahịa ebe-agbasa nile karịa mba 80 na mpaghara na ụwa. The Company na-mgbe na-ewepụtara na nkwalite nke akakabarede arụmọrụ nke ngwaahịa, nọgidere enhances R & D nke nkà na ụzụ ọhụrụ, mma n'ichepụta usoro, na obi dum na-enye photo-voltaic ngwaahịa na elu àgwà, elu pụrụ ịdabere na elu na-eri arụmọrụ maka ndị ahịa site n'onye nke ala-nke na-art technical uru na ihe ndị magburu onwe n'ichepụta larịị, ifịk ifịk na-akwọ ụgbọala n'oge mmezu nke okporo parity nke photo-voltaic ike ọgbọ
Ugbu a Anyị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ si USA, Mexico, Canada, Germany, UK, Brazil, Italy, Korea, Thailand, Australia, South Africa, Japan etc inye kacha mma services.We bụ ndị mpako nke eziokwu ahụ bụ na ihe karịrị 10GW anyanwụ oru ngo si n'ụwa nile na-eji Haitian anyanwụ photo-voltaic usoro.
Anyị na-ahọrọ ime ka dị ọcha ike na ngwaahịa na ọrụ na onye na nke anyị ụwa, niile na ngwaahịa na anyị na-enye bụ na gburugburu ebe obibi-echebe ngwaahịa! Ugbu ụwa ihu igwe na-edebe oké okpomọkụ ụbọchị, oké osimiri dị nwayọọ nwayọọ na-ebili, oké ihu igwe ugboro ugboro na-eme, anyị ndụ na gburugburu ebe obibi na-ama na eri ugbu a, anyị nwere ntị a pụrụ iche ihu igwe ọnọdụ na-eme ka ohere maka anyị dị ndụ n'ụzọ dị ka o kwere ka anyị na- nwere ike iji na-abụghị mmetọ, adịghị njọ Green na ngwaahịa! Ningbo Haitian advocating Green Energy, akwado gburugburu ebe obibi-echebe anyanwụ photo-voltaic Energy! Change World, Malite Site Ningbo Haitian.